FMVA® (Issued by Corporate Finance Institute) vs CFA® (Issued by CFA Institute)
Professionals တိုင်း တန်ဖိုးထား အသိအမှတ်ပြုရတဲ့ Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) နဲ့ Chartered Financial Analyst (CFA) Designation တွေရဲ့ အချက်အလက် Information တွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပြီး ကိုယ်အတွက် ဘယ်အရာဟာ အသင့်အတော်ဆုံးဖြစ်မလဲ အခုလက်ရှိအချိန်မှာ ဘယ် Designation က ကိုယ်ရဲ့ Career objective အတွက် အထောက်အကူပြုစေမလဲ လေ့လာသုံးသပ်လို့ရအောင် အောက်မှာ အများသိသင့်တဲ့ အချက်အလက်လေးတွေကို List လုပ်ပေးထားပါတယ်..
(လူသိများတဲ့ Designation တွေဖြစ်တဲ့ CPA, CAIA, CFP, FRM အချက်အလက်တွေကိုပါ ပုံလေးတွေနဲ့ထည့်သွင်းနှိုင်းယှဉ်ပေးထားတယ်)
CFA က Level3ဆင့်ရှိတယ် Level တစ်ဆင့်ကို အနည်းဆုံး တစ်နှစ်လောက် အချိန်ပေးရပြီး Level3ဆင့်လုံး အောင်မြင်စွာပြီးစီး ဖို့အတွက် အနည်းဆုံး3နှစ် မှ4နှစ် လောက် လိုပါတယ်… ( ဒါ့အပြင် CFA Title holder ဖြစ်ဖို့အတွက် အနည်းဆုံး Finance and Investment Field မှာ လုပ်သက် ၄နှစ်လိုပါတယ်)
FMVA ကတော့ Exam 1 ခုပဲရှိပါတယ်… သူရဲ့ Recommended study hours က နာရီ 200 ဖြစ်ပါတယ်…
ထုံးစံအတိုင်း ကမ္ဘာအခက်အခဲဆုံးလို့ 1 to 10 ထဲမှာ အမြဲနေရာယူထားတဲ့ CFA Exam Pass Rate က အမြဲတမ်း 30 to 50 Percent ဝန်းကျင်မှာပဲရှိပါတယ်…
FMVA ကတော့ Practical & Technical Plus General Business ကို Focus လုပ်တဲ့ Exam ဖြစ်တဲ့ အတွက် Pass Rate 70 Percent လောက်မှာ ရှိနေပါတယ်…
CFA ရဲ့ အဓိက Focus က Investment & Portfolio Management ဖြစ်ပြီး FMVA ကတော့ သူရဲ့ title အတိုင်း Financial Modelling နဲ့ Valuation ကို ကျွမ်းကျင်စွာတတ်မြောက်သွားဖို့ကို ပိုဦးစားပေးပါတယ်…
နှစ်ခုလုံးရဲ့ အားသာချက်ကတော့ မည့်သည့် Career မဆို လေ့လာထားနိုင်ရင် အကျိုးရှိတဲ့ Designation တွေဖြစ်ပါတယ်…
CFA ဟာ သင့်ကို လူတကာက လေးစားအသိအမှတ်ပြုရတဲ့ Investment Finance Professionals တစ်ယောက်အဖြစ်ကိုရောက်အောင်အထောက်အကူပြုပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ မလွှဲဧကန်ပါပဲ…
ထိုနည်းတူ CFA နှင့် အခြား Professionals တိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Technical Skill Set တွေဖြစ်တဲ့ Financial Modelling, Valuation, Excel တွေ, Business Strategy, Presentation Skill တွေအတွက်က တော့ FMVA Designation က တစ်ဖက်တစ်လှမ်က ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာသေချာပါတယ်..
နောက်ဆုံး Verdict အနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ အခုလက်ရှိ CFA Charterholder တစ်ယောက် ဒါမှာမဟုတ် Candidate တစ်ယောက်ဆိုရင် FMVA Designation ကို ရယူထားလိုက်တာ ကိုယ်ရဲ့ Credential အတွက် အများကြီး အထောက်အကူပြုမှာ ဖြစ်ပြီး…
သင်ဟာ အခုလက်ရှိမှာ FMVA ကိုလေ့လာနေတဲ့ Candidate ဆိုရင်တော့… CFA Designation ဟာ သင့်အတွက် ပိုမိုများပြားတဲ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းတွေကို ယူဆောင်လာပေးမျာဖြစ်ပါတယ်…
If you are someone who haven’t study or learn about any of those designation yet?
What holding you back????
There isaworld fill with opportunity waiting for you to be discovered!
Come talk with us and find out!
Phone 01 8245660, 09 445533 288-289